Imibuzo Xa Ubhenela iKholeji
10 Imibuzo onokubuzwa xa ukhankanya i-Academic Dismissal
Cinga Ngezimpendulo zale mibuzo ngaphambi kokuba isikhalazo sakho sisebuntwini
Ukuba uthe wagxothwa kwiikholejini ukuba usebenze kakubi emfundo, amathuba okuba unelungelo lokubhena eso sinqumo. Kwaye njengoko kuchazwe kule ngqungquthela yenkqubo yezibheno , kwiimeko ezininzi uya kufuna ukubhenela kumntu ukuba unikwe ithuba.
Qinisekisa ukuba ulungele isikhalazo sakho. Ukudibana nekomiti kumntu (okanye ngokuthe ngqo) akunakukunceda ukuba awukwazi ukuchaza into engafanelekanga kunye nento oceba ukuyenza ukulungisa iingxaki. Imibuzo elishumi engezantsi inokukunceda ukuba ulungiselele-yimibuzo yonke enokuthi ibuzwe ngexesha lesibheno.
Sixelele Yintoni Eyenzekayo.
Uphantse uqinisekiswe ukuba ubuze lo mbuzo, kwaye kufuneka ufumane impendulo enhle. Njengoko ucinga malunga nendlela ongayiphendula ngayo, zithembeke ngokuthe tye. Musa ukugxeka abanye - abaninzi bakho eklasini baphumelele kwiiklasi ezifanayo, ngoko ke abo ba-D'and F bawe. Impendulo engafaniyo okanye engathandekiyo ngathi "Andizi ngokwenene" okanye "Ndiyicinga ukuba ndifanele ndifunde kabanzi" abayikukusika.
Ukuba unenkinga yempilo yengqondo, phaya phambili malunga nezo zinto. Ukuba ucinga ukuba unengxaki yomlutha, ungazami ukufihla loo nto. Ukuba udlala amageyimu wevidiyo kwiiyure ezili-10 ngosuku, xelela ikomiti. Ingxaki yokukhonkxa yinto enokuqwalaselwa kwaye iyanqotshwa. Iimpendulo ezingenangqiqo kunye nezingavumelekanga zinika amalungu ekomiti ukuba asebenze kunye nabo, kwaye abayi kukwazi ukubona indlela yokuphumelela.
Ngaba uye waya kwiiofisi zamaofisi? Ngaba uye waya kwisiko lokubhala ? Ngaba uzame ukufumana umfundisi ? Ngaba usebenzise amathuba enkonzo ekhethekileyo? Impendulo apha ingase ibe "cha," kwaye ukuba kunjalo, qiniseka. Ndibone abafundi bethetha amabango anjengokuthi, "Ndizama ukumbona uprofesa wam, kodwa wayengakaze eofisini lakhe." Amabango anjalo awanakunqwenela ukuba onke ama-profesors anamaxesha e-ofisi rhoqo, kwaye unako ukuhlala uthumela i-imeyli ukucwangcisa i-aphoyintimenti ukuba iiyure zee-ofisi ziphikisana neshedyuli yakho. Naliphi na impendulo nge-subtext, "kwakungeyonto yam inkohlakalo endingazange ndiyifumane" inokuthi ihambe njengebholethi ekhokelayo.
Ukuba uncedo olufunayo lwaluyinkathalo, kungekhona imfundo, amaxwebhu yinto efanelekileyo. Oku kufuna ukuvela kuwe kuba iirekhodi zonyango ziyimfihlo kwaye azikwazi ukwabelwana ngaphandle kwemvume yakho. Ngoko ukuba ufumana iingcebiso okanye uphinde uphume kwiingqungquthela, faka amaxwebhu acacisiweyo evela kumgqirha. I-excuse ye-concurrenti yezizathu zengxubusho yilapho iikomiti zezemfundo ziye zabona ngokuphindaphindiweyo kwiminyaka yamuva. Yaye nangona iingxoxo zinokuba zibi kakhulu kwaye ngokuqinisekileyo zinokuphazamisa imizamo yomfundi, nazo zizathu ezilula kumfundi ongekho kakuhle esikolweni.
Uchitha ixesha elingakanani umsebenzi wesikolo nganye iveki?
Phantse ngaphandle, abafundi abaphelisa ukugxothwa kwintsebenzo yezemfundo abahluphekanga abafundanga ngokwaneleyo. Ikomiti inokukubuza ukuba ufunde kangakanani. Nantsi kwakhona, nyaniseka. Xa umfundi ophethe i-0.22 GPA uthi ufunda iiyure ezintandathu ngosuku, into ibonakala iluncedo. Impendulo engcono ibe yinto ethile kule migca: "Ndichitha ihora nje ngosuku ngomsebenzi wesikolo, kwaye ndiyabona ukuba akuyanele."
Umgaqo oqhelekileyo wokuphumelela kwekholejini kukuba kufuneka uchithe iiyure ezimbini ukuya kweyesihlanu emsebenzini wesikolo kunye neyure nganye oyichitha eklasini. Ngoko ukuba unomthwalo weeyure eziyi-15, loo mizuzu i-30 ukuya kwi-45 yomsebenzi wesikolo ngeveki. Ewe, iikholeji ngumsebenzi wexesha elizeleyo, kwaye abafundi abayiphatha njengengqesho yesikhathi esithile bahlala befumana ingxaki yokufunda.
Ngaba Ulahlekelwe iLoti leeKlasi? Ngoba?
Ndiyiphumelele abafundi abaninzi kwiminyaka yam njengenguprofesa, kwaye i-90% yala bafundi, ukuhamba ngokungahambi kakuhle kwaba negalelo elikhulu kwi "F." Ikomidi yezibheno inokukubuza malunga nokuhamba kwakho. Nantsi kwakhona, nyaniseka. Ikomiti inokwenzeka ukuba ifumaneke iziphakamiso ezivela kubafundisi bakho phambi kwesibheno, ngoko baya kukwazi ukuba ngaba hayi. Akukho nto inokubhenela ngokukhawuleza kunokuba ibanjwe ngamanga. Ukuba uthe waphoswa nje ngeeklasi ezimbalwa kwaye iiprofesa zakho zithi zilahleke iiveki ezine zeklasi, ulahlekelwe yithemba lekomiti. Impendulo yakho kulo mbuzo ufuna, ukunyaniseka, kwaye kufuneka udibanise ukuba kutheni ulahlekelwe iklasi, nokuba ngaba isizathu sihlazo.
Kutheni Ucinga Ukuba Ufanelekile Okwesibini?
Ikholeji ityala kuwe njengokuba utyalomali kwinqanaba lakho lekholeji. Kutheni kufuneka ikholeji ikunike ithuba lesibini xa kukho abafundi abanezakhono abanomdla wokuthabatha indawo yakho?
Lo ngumbuzo onzima ukuphendula. Kulukhuni konke okusemandleni akho xa unemibhalo ebhalwe ngamabakala amakhwenkwe. Qhubeka ukhumbula, nangona kunjalo, ukuba ikomiti iyabuza lo mbuzo ngokunyanisekileyo, ukuba ungakuhlazisi. Ukungaphumeleli kuyingxenye yokufunda nokukhula. Lo mbuzo uyithuba lakho lokuchazela oko ufundile ekuphumelekeni kwakho, kwaye nantoni na othembayo ukuyifeza kunye negalelo ekukhanyeni kwakho.
Yintoni Oya Kuyenza Ukuze Uphumelele Ukuba Uvunyiwe?
Ngokuqinisekileyo kufuneka ufikelele kwisicwangciso sempumelelo esizayo ngaphambi kokuma phambi kwekomiti yezibheno. Ziziphi iifundo zekholeji ozakuzisebenzisa ngokufudukela phambili? Uya kutshintsha njani imikhwa emibi? Uya kufumana njani inkxaso oyifunayo ukuze uphumelele? Yiba neengqiqo - andikaze ndidibane nomfundi oye wahamba ngokufunda ebusuku imizuzu engama-30 ukuya kwiiyure ezintandathu ngosuku.
Isilumkiso esifutshane apha: Qinisekisa ukuba isicwangciso sakho sokuphumelela sibeka umthwalo oyintloko kuwe, kungekhona uxanduva kwabanye. Ndibonile abafundi bethetha izinto ezinje, "Ndiya kudibana nomcebisi wam ngeveki ukuba ndixoxe ngeenkqubela zam zezemfundo, kwaye ndiza kufumana uncedo olungakumbi ngexesha lonke leofisi yeprofesa." Ngoxa i-professors kunye nomcebisi wakho baya kufuna ukukunceda kangangoko kunokwenzeka, akunangqiqo ukucinga ukuba banokuchitha iyure okanye ngaphezulu kweveki kumfundi omnye.
Ngaba Ukuthatha Inxaxheba Ekuhlaselweni Kwezemidlalo Kukulimaza Ukusebenza Kwezemfundo?
Ikomiti ibona oku kuninzi: umfundi ulahlekelwa iiklasi ezininzi kwaye azinike iiyure ezimbalwa ukufundisisa, kodwa ngokumangalisayo akalokothi alahleke iqela elilodwa. Isigijimi esi sithumela kwikomiti siyabonakala: umfundi ukhathalele ngakumbi ngemidlalo kunemfundo.
Ukuba ungumdlali, cinga ngeendima zezemidlalo ezidlalwa ekusebenzeni kwakho kobuhlwempuzekileyo kwaye uzilungiselele ukulungisa umba. Qaphela ukuba impendulo engcono kakhulu ayinakuthi, "Ndiya kuyeka iqela lebhola ukuze ndifunde yonke imini." Kwezinye iimeko, ewe, imidlalo ithatha ixesha elide kakhulu lokuba umfundi aphumelele esikolweni. Kwezinye iimeko, ke, iimbaleko zinikeza uhlobo loqeqesho kunye nomhlaba onokumncoma ngokucwangcisekileyo isicwangciso esiphumelele esikolweni. Abanye abafundi abahlali banovuyo, bengenabungozi, bengenakunqandwa xa bengadlala imidlalo.
Nangona uphendule lo mbuzo, kufuneka uchaze ubudlelwane phakathi kwezemidlalo kunye nokusebenza kwakho kwezemfundo. Kwakhona, kufuneka uqwalasele indlela oza kuphumelela ngayo kwixesha elizayo, nokuba oko kuthetha ukuthatha ixesha kwiqela okanye ukufumana isicwangciso esitsha sokulawula esiza kukuvumela ukuba ube ngumdlali ophumelelayo nomfundi.
Ngaba Ubomi beGrike buyingxaki kwiNtsebenzo yakho yokuFunda?
Ndibone abafundi abaninzi beza phambi kwekomiti yezibheno abaye bahluleka ngenxa yobuGrike ubomi - bebefudula batshabalalisa intlangano yeGrike, okanye babechitha ixesha elide kunye nemicimbi yamaGrike kunezo zemfundo.
Kule meko, abafundi abazange baphinde bavume ukuba ubudlelwane okanye uhlazo lwangumthombo wengxaki. Ukunyaniseka kwintlangano yaseGriki bekusoloko kubonakala kubaluleke ngaphezu kwayo nayiphi na into, kwaye ikhowudi yokufihlakeleyo kunye nokwesaba ukuhlawulela kuthetha ukuba abafundi abayi kubeka umnwe kubudlelwane babo.
Le ndawo iyindawo ekhuni ukuba ibe kuyo, kodwa kufanele ufune umphefumlo othile xa ufumanisa kule meko. Ukuba ukumbambisa intlangano yamaGrike kukubangela ukuba uhlasele amaphupha akho ekholejini, ngaba ucinga ukuba ubulungu kuloo ntlangano yinto ofuna ukuba uyenze? Yaye ukuba unobunyana okanye uhlazo kunye neentlalo zoluntu zininzi kakhulu kangangokuthi zilimaza umsebenzi wakho wesikolo, ngaba kukho indlela yokuba ufundele ikolishi yakho? Cinga ngenyameko malunga neenzuzo kunye neengxaki zokujoyina ubuzalwana okanye ukuhlaziywa .
Abafundi abaqiniweyo xa bebuzwa ngobomi baseGrike ababancedisi isibheno sabo. Ngokuqhelekileyo amalungu ekomiti asele evakalelwa kukuba abafumani ibali lokwenyaniso, kwaye abayi kuba novelwano kwimeko yomfundi.
Ngaba Utywala okanye Iziyobisi Ziyadlala Indima Ekusebenzeni Kwenu Kwezemfundo?
Abafundi abaninzi baphela kwiinkathazo zemfundo ngenxa yezizathu ezingenanto nxamnye nokusetyenziswa kakubi kweziyobisi, kodwa ukuba iziyobisi okanye utywala zibangele ekusebenzeni kwakho kobuhlwempu, zilungele ukuthetha ngolu hlobo.
Ngokuqhelekileyo ikomidi yezibheno iquka umntu ovela kwimicimbi yabafundi, okanye ikomiti inokufikelela kwiirekhodi zemicimbi yabafundi. Lezo ziphulo ezivulekileyo zentsimbi kwaye eso siganeko se-bong siyakwaziwa yikomiti, njengoko iza kubika ukuziphatha okuphazamisayo kwiiholo zokuhlala. Yaye uthembele kum, ootitshala bakho bayayazi xa ufika eklasini ngamatye okanye u-hungover, njengokuba banokutsholwa ukuba ulahlekile kwezo zifundo zentsasa ngenxa yeentsimbi.
Ukuba ubuzwa malunga notywala okanye iziyobisi, kwakhona kwakhona impendulo yakho eyona nto iyinyanisekileyo: "Ewe, ndiyazi ukuba ndonwabile kakhulu kwaye ndayiphatha inkululeko." Hlalani nikulungele ukujongana nendlela uceba ukutshintsha ngayo ukuziphatha okubi, kwaye uthembeke ukuba ucinga ukuba unengxaki yotywala - yinto eqhelekileyo.
Ziziphi Izicwangciso Zakho Ukuba Awunakulungiswa?
Impumelelo yesibheno sakho ayikho into eqinisekileyo, kwaye akufanele uphinde ucinge ukuba uya kubhalwa. Ikomiti inokukubuza ukuba zeziphi izicwangciso zakho ukuba unqanyanyisiwe okanye ususwe. Ngaba uya kufumana umsebenzi? Uya kuthatha iikholeji zasekuhlaleni? Ukuba uphendula, "Andizange ndiyicinge ngako," ubonisa ikomiti a) ukuba awucingeli kwaye b) ukuba uyazikhukhumeza ekucingeni ukuba uya kubhalwa. Ngoko, phambi kwesibheno sakho, cinga ngeSicwangciso sakho B.
Ukuba ubhala ngokubhaliweyo kwaye unqwenela uncedo luka-Allen Grove ngencwadi yakho yesibheno, khangela i-bio yakhe ngeenkcukacha.
Ezinye iingcamango zokugqibela
Isibheno akusilona ixesha lokuba ubonakale uthembele kakhulu kunye ne-cocky, kwaye akukho naluphi uhlobo lokumisa okanye ukugxeka abanye abaya kuhamba kakuhle. Unethamsanqa ukuba unikezwe ithuba lokubhena, kwaye kufuneka uphathwe isibheno ngenhlonipho nokuhlaselwa. Kwaye nantoni na enokwenzayo, nyaniseka malunga nokungahambi kakuhle kwaye ube necebo elicacileyo kodwa eliyiyo elizayo. Umnqweno omhle Ezinye iinqununu ezixhomekeke kwiiNkcazo zokuPhumela iziKhuseleko: Iingcebiso ezi-6 zokubhenela i-Letter of Dismissal Jason's Appeal Letter (uJason waxoshwa ngenxa yokusetyenziswa kakubi kotywala) I-Critique ye-Jason yokuBhenela i-Letter ye-Let's Appeal Letter (i-Emma yayinzima kwiimeko zeentsapho) I-Critique ye-Emma's Letter Brett's Appeal's Appeal Incwadi (iBrett ityala abanye ngenxa yokuhluleka kwayo) I-Critique ye-Brett's Letter 10 Tips for the In-Person Appeal 10 Imibuzo onokubuzwa xa Ubhenela ukuCima
IQumrhu Eliqilileyo leNgqungquthela eLawulayo kwakhona
I-SAT ephantsi okanye UMTHETHO WESIKOLO? Hlola ezi Iikholeji ze-Test-Optional
Umzekelo Wempendulo kwiNcwadi yokuLawula iKholeji
IiKholeji eziPhambili zee Equestrian
Iinkcukacha Ezilishumi Ongazi Ngayo Ngenyanga ka-Apreli
7 Iziganeko zeNqanaba lokuPhupha okuPhezulu lokuPhepha okuPhezulu
I-Word Word Search Puzzles
I-Biography kaJimmy Hoffa, i-Legendary Teamsters Boss
Ukutya okugqwesileyo kwiNtlanganiso yeGymnastics
"I-Young Frankenstein" kunye neeHorses zeWhinnying
Yisiphi Isithelo Senu Esiqinileyo Somoya?
Ngaba isenzi sesiFrentshi 'Souhaiter' sidinga ukuxhasana?
Umzi weMbali yeCotton (Gossypium)
Ndilambile! Kutheni Ndifanele Ndizibethe?
Ama-20 ama-Best American-American Horror Movies
Ngaba Ndimele Ndihambe? Vs. Iingcingo ezingenazo
100 Iimpawu ezimnandi
Iprotocol yeFlying Flag of American kwiSikhumbuzo
Imbali yeWWE (World Wrestling Entertainment)
Ukunciphisa iNqanaba leOxygen kwiiNxweme zeHlabathi
IiRekodi zeVine zeAhio
Ukulinganisa iiRods kunye neeReels zeBass Fishing
Umculo weBluegrass: Iimpawu ezigqwesileyo kunye nezobugcisa
Ziqhelise ekuxhaseni iSigwebo sesiThupha ngeenkcukacha ezithile
Imali Ukuqalisa okanye Ukwandisa iBhizinisi elincinci